7 Sababood oo Mawduucaagu ugu guuldareysto inuu la qabsado Millenniyooyinka | Martech Zone
Waxaa jira mararka qaarkood markaan akhriyo natiijooyinka gaarka ah ee kooxaha bulshada ama juqraafiyeed ee aan waxyar ka taahayo. Ma dhahayo warbixintan in NewsCred aysan muhiim u aheyn suuqleyda inay maanka ku hayaan, laakiin waxaan aaminsanahay inaan badanaaba u janjeersano xogta mararka qaarna aan gaarno gabagabo aan sax ahayn.
Waxaan badanaa weydiiyaa qof, halkii aad kaheli laheyd 10,000 oo qof oo leh jawaabta 1% ama 500 oo qof oo leh jawaabta 25%? Haddii ay dhacdo inaad ku dhibtooneyso xisaabta - tan dambe waxay keeneysaa 25 jawaab-bixiyeyaal dheeraad ah. Marka, mararka qaarkood ma aadeyso halka celceliska… mararka qaarkood ay tahay inaad si qoto dheer ugu dhaadhacdo halka ay nicheesyada ku yaalliin.
Xaqiiqdii, marka loo eego millennials, waxaan xitaa ku doodi karaa in la gaaro dheeraad ah waxay noqon kartaa mid wax tar leh. Xogta ka soo baxday sahankan waxay muujineysaa inaysan dooneyn in la iibiyo… marka maxaad u kordhineysaa gaadhitaankaaga si aad uga iibiso dhamaan shabakadahaan iyo istiraatiijiyaddan? Weli waxaan kugula talin karaa warbaahinta bulshada inay tahay mid dhexdhexaad ah, laakiin istiraatiijiyaddu way ku kala duwanaan doontaa gabi ahaanba iyadoo lagu saleynayo qeybaha aan doonayo inaan ku biiro.
Maxay noocyadu u daneeyaan millennials-ka? Marka la gaaro sannadka 2020, millennials-ka waxay wadarta guud ka badan $ 1.4 tiriliyan ee awoodda kharash garaynta. Calaamadaha, taasi waxay ka dhigan tahay haddii aadan gaarin millennials, inaadan la jaanqaadi doonin mustaqbalka. Mawduucu wuxuu kiciyaa isku xirnaanta sumcadda, laakiin haddii mawduucaagu uu gabi ahaanba ku guuldareysto inuu ku lug yeesho dhagaystayaashaaga bartilmaameedka ah, waa maxay ujeedku? 62% millennials-ka waxay dareemayaan in waxyaabaha ku jira qadka tooska ah ay ka dhigayaan inay dareemaan isku xirnaan badan iyo daacad u ah astaan, laakiin kaliya 32% ayaa u arka isgaarsiinta maantu maanta mid waxtar leh.
NewsCred waxay bixisaa talooyinka soo socda si ay ula jaan qaadaan millennials:
Ku habboon waxyaabaha shakhsi ahaaneed danaha dhaqanka.
Hubso in waxyaabaha ku jira ay yihiin waxtar leh ama waxtar leh xagga xallinta dhibaatooyinka maalinlaha ah ee millennials.
Iska ilaali inaad iibiso-y ama is-xayeysiin.
Ujeeddadu ahaato feker-kicinta oo caqli badan.
Bangiga ha dhigin xayawaan ama ansaxinta bulshada kaligeed.
Hubi shakhsi ahaaneed sicirka qiimaha, goobta, jinsiyada, iwm.
Keen qaabab fudud oo fudud dheef iyo wadaag.
Si aad wax badan uga barato adeegsiga waxyaabaha ku jira suuqyada illaa millennials-ka, oo ay ku jiraan afar xaaladood oo daraasado ah oo ku saabsan noocyada si sax ah u soo dejista Hagaha Millennials-ka ee bilaashka ah ee NewsCred maanta!
Tags: content infographicContent Suuqinfographicmillimiyadainfographic kun sanowarka